निखिललाई ‘भैरव रिटन्र्स’को हतारो, हातमा कती धेरै फिल्म ? « Mazzako Online
निखिललाई ‘भैरव रिटन्र्स’को हतारो, हातमा कती धेरै फिल्म ?
व्यस्तता होस् त अभिनेता निखिल उप्रेतीको जस्तो । उनलाई शुक्रबारदेखि फिल्म ‘किङ’को छायांकनमा जानुछ । यसपछि, फिल्म ‘निर्भय’ उनकै बाटो हेरिरहेको छ । अन्य निर्माता पनि निखिलको डेट कहिले पाइन्छ भनेर कुरिरहेका छन् ।
एनले भर्खरै फिल्म ‘संरक्षण’को छायांकन पनि भ्याएका छन् । निखिललाई भदौदेखि त आफैले निर्देशन र अभिनय गरेको फिल्म ‘भैरव रिटन्र्स’को पनि छायांकन थाल्नुछ । केही बर्ष ‘भैरव’को सिक्वेल बन्दैन भनेका निखिल एक बर्ष वित्न नपाउँदै यसको सिक्वेल बनाउन तातिए । यसको मुख्य कारण हो, नेपालमा फिल्मको सिक्वेल बनाउने लहर र वितरक गोपाल कायस्थको साथ ।
वितरक तथा निर्माता गोपाल कायस्थसँग मिलेर निखिलले यो फिल्म बनाउन लागेका हुन् । फिल्मका लागि निर्देशक भने नयाँ खोजिएको छ । निखिलले यसरी काम गरे भने बर्षमा ३ वटा फिल्म हलमा लाग्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा निखिलको स्टारड कायम नै रहला त ?